Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Maxay Tahay Goobaha Dalxiisyaasheeda Ugu Akhlaaq Wanaagsan?
Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dalxiisayaasha ugu edebsan
Marka laga hadlayo socdaalka caalamiga ah, waa mid soo jireen ah, oo laga yaabo inay cadaalad darro tahay, fikrad khaldan oo laga qabo in dalxiisayaasha Mareykanka aysan ahayn kuwa ugu dalxiisayaasha edeb badan, oo leh karaamo bulsheed oo aan badnayn oo lagu tilmaamo inay yihiin kuwo buuq badan oo laga xumaado Aragtidan ayaa laga yaabaa inay isbeddelayso xilliyada ka dambeeya COVID-da, maadaama meelaha caalamiga ah ay u dheer yihiin dalxiisayaasha Mareykanka.
Ma ogtahay in dadka ka soo jeeda Hong Kong ay neceb yihiin in indhaha laga jabiyo.
Mise qof Jabaan ah oo dhoola cadeynaya maahan farxad?
Tilmaamid khaldan ama faallooyin ayaa leh suurtagalnimada in xaalad socdaal laga dhigo mid fool xun.
Soo qaado hage kasta oo safar ah waxaadna u badan tahay inaad heshid qayb u heellan arrimo kala duwan oo dhaqanno gaar ah leh oo aad ku fiicnaan lahayd inaad barato ka hor intaadan bilaabin safarka meelo badan. Laakiin sidee ayay Mareykanku ugu dhex socdaan xudduuddooda? Websaydhada heshiiska fasaxa, NextVacay.com, waxay dejisay "tusmada edebta dalxiiska" si loo go'aamiyo, dawlad ahaan, taas oo dadka Mareykanka ah ay leeyihiin sumcadda ugu fiican uguna xun markay dalxiis ku joogaan.
Waxay xog ururiyeen 3,000 oo qof waxayna waydiisteen jawaab bixiyaasha inay qiimeeyaan edebta dalxiiska ee 1 ilaa 10. Waxaa la ogaaday in dalxiisayaasha ugu edeb badan ay ka soo jeedaan Alaska, iyagoo ku qiimeeyay 8/10 habdhaqankooda safarka. Waxaa loo yaqaanaa dib u dhigis quruxsan, waxaa laga yaabaa inaysan layaab aheyn socdaalayaasha Alaska inay aad u kala sarreeyaan - dadka wanaagsan ee The Last Frontier sidoo kale way yaqaanaan sida loo safro - wadada weyn ee Alaska Interstate waxay ka kooban tahay 4 waddo oo kaliya, sidaa darteed waxay si fiican ugu barteen inay leeyihiin si loo waafajiyo qorshooyinka safarka iyada oo aan wax cabasho ah laga qabin.
Hawaii Kaalinta 2aad Ka Gashay
Tani malaha wax lala yaabo ma aha iyadoo la tixgelinayo gobolka lagu yaqaan inuu yahay Aloha Ruux ku daadiya dalxiisayaasha booqashadaas. Sidee xun u noqon karaa meel lagugu salaamo layn ubax oo dadka deegaanku ay ku faraxsan yihiin inay ka caawiyaan tilmaamaha iyo soo-jeedimaha, dhammaantoodna leh "Welwel la'aan" oo qayb ka ah hagitaankooda? Waxaa jira sabab wanaagsan oo loogu yeero Jannada.
Dalxiisyaashii ugu edeb yaraa
In ka badan 1 meelood 3 ayaa sheegaya inay fasax ku qaateen dhaqan xumada dalxiisayaasha kale. Dalxiisyaashii ugu fiicnaa, si kastaba ha noqotee, waxay ahaayeen kuwa ka yimid gobolka Washington, oo qiimeeyay 4 kaliya 10-ka. In kasta oo Gobolka Evergreen laga yaabo inuu si isdaba-joog ah u qiimeeyo marka ay timaado gobollada u habboon deegaanka, sumcaddeeda marka ay timaaddo saaxiibtinnimo waxay qaadataa dheef weyn. . Sida laga soo xigtay sahan lagu sameeyay 2019, in ka badan kalabar dadka deggan Waqooyiga-galbeed ee Baasifigga xitaa ma doonayaan inay si kooban ula hadlaan dadka aysan horey u aqoon. Waxay kalsooni siineysaa ifafaalaha loo yaqaan "Seattle Freeze" - oo loola jeedo aaminaad ballaaran oo la qabo in ay si gaar ah u adag tahay in saaxiibo cusub lagu yeesho magaalada Washington ee Seattle. Haddii aysan si gaar ah ula macaamilin walaalahooda maxalliga ah, waxaa laga yaabaa inaysan la yaab lahayn inayna jeclaanin dadka maxalliga ah ee ka imanaya gobollada kale markay fasaxa yihiin. Sidoo kale edeb la'aan, dalxiisayaasha ka yimid Connecticut ayaa kaalinta 4 ka galay 10.
Tusmada Hab-dhaqanka Dalxiisayaasha Isdhexgalka
Waxay sidoo kale u muuqataa in Mareykanku ay ka yar yihiin aragtida wanaagsan ee walaalahooda walaalaha ah markay u safrayaan dibadda. In ka yar kala bar ayaa u maleynaya in dalxiisayaasha Mareykanka ee dibedda jooga ay yihiin edeb, sidaa darteedna, aysan si fiican u metelin dalkooda - taas oo saameyn ku yeelanaysa boqolkiiba 68 jawaab bixiyaasha si ay u qirtaan inay ka fogaan doonaan inay aadaan meel shisheeye haddii ay ogaadaan inay leeyihiin sumcad xumo caan ah. halkaas.
U dhow guriga, ku dhowaad kalabar (42 boqolkiiba) ee dadka la daraaseeyay ee ku nool meelaha dalxiisku ku badan yahay ayaa sheegay inay dhab ahaantii bixi doonaan (haddii ay awoodaan) xilliga fasaxa, si looga fogaado dalxiisayaasha. Jawaab bixiyayaashii 1kiiba 3 ayaa sheegay in ay kujireen fasax dalxiis oo si taban ay u saameeyeen dhaqan xumada kuwa kale ee dalxiisayaasha ah darteed. Xaqiiqdii, waxaa jiri kara waqtiyo gaar ah sanadka - sida Gu'ga Fasaxa - oo soo jiidan kara dalxiiska akhlaaqda wanaagsan.
In kasta oo fikrado khaldan laga qabo, haddana waa dhiirrigelin in boqolkiiba 82 dalxiisayaasha Mareykanka ah ay yiraahdaan waxay si adag u raaci doonaan borotokoollada 'COVID' markay u safrayaan dibadda, sida maaskaro xiran iyo fogeynta bulshada.
Ugu dambeyntiina, boqolkiiba 38 waxay qirayaan inay dhab ahaan u xiisay Mareykanka markii ay dibadda joogeen.